Shir ku saabsan dhammaystirka heshiiskii Maygaagle oo ka furmay degaank Saax-dheer ee gobolka Sool – Puntland Post
Posted on May 10, 2018 May 10, 2018 by CCC
Shir ku saabsan dhammaystirka heshiiskii Maygaagle oo ka furmay degaank Saax-dheer ee gobolka Sool
Shir ku saabsan dhammaystirka dib-u-heshiisiinta beelaha Cumar Maxamuud iyo Bah-haharsame oo ay ka qeyb galayaan in ka badan saddex boqol oo ergo labada dhinac ah ayaa shalay ka furmay degaanka Saax-dheer ee gobolka Sool.
Shirkaan oo ay gogoshiisa fidisay beesha Bah-hararsame ayaa daba socda,shirkii dib-u-heshiisiinta labadan beelood oo 10 Febraayo ee sannadkaan ka qabsoomay degaanka Maygaagle ee gobolka Nugaal,waxaana lagu dhammaystiraya qodobada heshiiskii hore,gaar ahaanna arrimaha ku aaddan isu-celinta hubka iyo hantida ku kala maqan labada dhinac,sida ay sheegayan dad xog-ogaal ah oo madasha ku sugan.
Heshiis ka kooban sagaal qodob oo bishii Febraayo ee sannadkaan lagu gaaray degaanka Maygaagle ee gobolka Nugaal ayaa isimada iyo waxgaradka labada beelood ka sheegeen in ay si buuxda uga heshiiyeen dhammaan khilaafaadkii iyo colaaddi u dhexaysay,waxaana dhaqan-gelinta iyo dhammaystirka hawshaas loo xilsaaray guddi wadaag ah.
Colaadda beelahan ka heshiiyeen ayaa salka ku haysa muran ka dhashay ceelal iyo carshin(dhul-daaqsin) ku teedsan soohdinta u dhexaysa gobolada,Sool iyo Nugaal ee xigta dhinaca Ethiopia,halkaasi dhowr jeer oo hore dagaallo khasaaro geystay ka dhaceen.
Nin kamida dadkii uu qabsaday weerarka dhisme ku yaal Nayroobi oo macasalaameeyey aduunka
Puntland: Cumar Faaruuq oo laga mamnuucay in uu shirar ku qabto Garoowe
Maamulayaasha Shirkadaha Golis iyo Eeneeya oo xabsiga loo taxaabay
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay in weerarka Nairobi uu weji xun kale muujiyay